မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: တွေး၊ ဆွေးနွေး၊ အဖြေပေးလို့ ရနိုင်မလား
တွေး၊ ဆွေးနွေး၊ အဖြေပေးလို့ ရနိုင်မလား
ကနေ့ အပြင်းအထန် ဆွေးနွေး၊ အခြေအတင် ပြောဆိုနေကြတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။ အားလုံးလည်း
သိကြမယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က မိတ်ဆွေများ အားလပ်တဲ့ တနင်္ဂနွေမို့လို့ မီးခဲတစ်စ ချပေးတယ်လို့တော့
မယူဆစေချင်ဖူး။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်ကိုတော့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာတာ
မျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ အဲဒါကတော့ “ခေါင်းမြီးခြုံသင့်၊ မခြုံသင့်” ဆိုတာပါ။
အများစုသိကြတဲ့အတိုင်း လက်ယာအစွန်းရောက်တွေ ပြန်အားကောင်းလာတဲ့ ဥရောပမှာ နိုင်ငံ
အတော်များများ (ဘယ်ဘာသာမဆို) ခေါင်းမြီးအပြည့်ခြုံတာမျိုးကို ဥပဒေထုတ်ပြီး တားမြစ်ဖို့ ကြိုးစား
လာကြတာတွေ့ရမယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ ၂၀၀၁ တုန်းက ပြိုသွားတဲ့ ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှု အဆောက်
အအုံဘေးမှာ ပလီတစ်ကျောင်း ဆောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်တွေ ဖြစ်နေ
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ ခေါင်းမြီးခြုံတာကိုပဲ ဦးတည်ကြရအောင်။ အလွယ်တကူ မြင်နိုင်တဲ့
အချက်တွေကို ချပြပြီး ပြန်လှန်ဆွေးနွေးချက်တွေကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျိုးကြောင်းဆက်
စပ်ပြီး ပြောတာမျိုးနဲ့ တမင်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တဲ့ အမြင်တွေအတွင်းပဲ ကန့်သတ်ဆွေးနွေးစေချင်
ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ အချို့လည်း သိပြီးဖြစ်မယ့် အဖြစ်တစ်ခုကို စီအန်အန်က တလောကတင်ပြ
သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ပိုလန်နိုင်ငံက ကတုံးလူရမ်းကားတွေအနေနဲ့ ဂျူးတွေကို မုန်းတီးရိုက်နှက်
ခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်၊ သူကိုယ်တိုင် ဂျူးလူမျိူးဆိုတာ သိလိုက်ရမှ နောင်တရတဲ့အဖြစ်ကိုပါ။)
◊ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တာလီဘန်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်က ခေါင်းမီးခြုံတာတောင် ခြေမျက်စိ မပေါ်ရ၊ မျက်
လုံးတွေပါဖုံးဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။
◊ တီဗီအစီစဉ်တစ်ခုမှာ အမေးအဖြေလုပ်တော့ Sheik တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာ
ဝင်အမျိုးသမီးတွေမှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့တော့ ခေါင်းမြီးခြုံခိုင်းဖို့ မလုပ်ပါဘူးလို့
(အာပတ်လွတ်) ဖြေသွားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
◊ မွတ်ဆလင် ပညာရှင်တစ်ဦးကတော့ ဒီဝတ်ဆင်မှုဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာ အစအဦးမှာ မရှိခဲ့ဖူး၊
မဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ရမယ့် အဝတ်အစားမဟုတ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါလို့ ပြန်
◊ ဒီအစီအစဉ်မှာပဲ ခေါင်းမြီးခြုံ အမျိုးသမီးအချို့ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖြေ
ထဲက အဓိကတွေကတော့ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်၊ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တို့
ရဲ့ ဓလေ့ဖြစ်တယ်၊ သူတို့ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်နှောင့်ယှက်မှုမပေးဖူး၊ ဒီလိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် လွပ်
လပ်မှုကို ရရှိခံစားရတယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်။
◊ ဖိတ်ထားတဲ့ လူမှုရေးပညာရှင်တစ်ယောက်က အပေါ်က အမျိုးသမီးတွေဖြေသွားတာဟာ ခေတ်သစ်
မူဆလင် လူငယ်တွေရဲ့ အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ အဓိက အနောက်
တိုင်း (ယဉ်ကျေးမှုတွေ)နဲ့ ဆက်စပ်မိပြီး သို့မဟုတ် ရောက်ရှိသွားပြီး မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ
ကိုယ့်ရဲ့ပင်ရင်း(လူမျိုး၊ ဘာသာ) လက္ခဏာကို ပြန်ရှာထိန်းသိမ်းလာကြတဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံပါလို့
◊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ခေါင်းမြီးခြုံတာဟာ အမျိုးသမီးတွေ
ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဆုံးရှူံးစေတယ်။ တဖက်လူနဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ မျက်နှာအမူအ
ယာ ခံစားမှုတွေ မဖေါ်ပြနိုင်သလို တဖက်လူမှာလည်း မျက်နှာမမြင်ရလို့ မတရားကြောင်း၊ မိန်မချင်း
ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပေမယ့် အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မိသားစုဝင်
တွေကလည်း ခေါင်းမြီးခြုံဖို့ ဖိအားမပေးသင့်ကြောင်းတွေ ပြောသွားပါတယ်။
◊ အမြင်ပြင်းထန်သူတစ်ဦးကတော့ လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကို အဓိကထားပြောသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ဓါးပြတိုက်သွားတာတို့၊ ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ရှောင်တိမ်းသွားတဲ့ ရာဇဝတ်သားတွေ၊ ဗုံးခွဲမှု
တွေအကြောင်း အတော်ပြောသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
◊ ခေါင်းမြီးခြုံတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗီဒီယိုအနေနဲ့ အင်္ဂလန်က ဘာသာမဲ့သမား Pat Condell ဆိုတဲ့သူရဲ့
ဆိုဒ်မှာ သွားရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အချို့နေရာမှာတော့ တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံဆောင်ပါတယ်။
◊ ခေါင်းမြီးခြုံတယ်ဆိုရာမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေပေမယ့် ခရစ်
ယာန်သီလရှင်နဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အိန္ဒိယမှာ ဇာမဟုတ်တဲ့ အသားပိတ်နဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံတာမျိုးတွေကို
အလွယ်တကူ တွေ့တာတွေကိုတော့ ချပြလိုက်ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုယူဆသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်
စားမိတယ်။ ကျနော်လည်း ထပ်သိတာရှိရင် ပြန်ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
၀၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀
Posted by မန်းကိုကို at 10/03/2010
Anonymous October 3, 2010 at 11:01 PM
ဒီကွန်မန့်ကို Facebook က ခွင့်တောင်းပြီး ကူးလာတာပါ။
လင်း Lynn said - ပြင်ပကမာ နဲ့ ကူးလူး ဆက်ဆံမှုမှာ ( social interaction) သိပ်တော့ သက်တောင့်သက်သာ အနေအထား ဖြစ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ၀တ်ခြင်းမ၀တ်ခြင်းကတော့ လူတိုင်းမှာ သူ့အခွင့်အရေးနဲ့သူပါ။ လူတယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ပြတင်းပေါက်တွေဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးကနေတဆင့်၊ မျက်နှာ အမူအရာ ကနေတဆင့် ဖတ်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ခက်ခဲမယ်။ ဥပမာ- အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ကြေကွဲနေတဲ့ မျက်လုံးအစုံကို အလွယ်တကူ ကျမတို့ မသိနိုင်ဘူး။ အကယ်လို့ မျက်နှာကို ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင် ဒီဖုံးကွယ်မှုက ကျူးလွန်သူကို အသာစီးပေးတာမျိုးဘဲ။ ဘာကာ အမြဲဝတ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာကတော့ အဆင်ပြေနေမှာပါဘဲ။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကို နေသားကျနေပြီ။ အနောက်တိုင်း စံနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒါက တော်တော် အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူး။ ( ဘာကာ ၀တ်တာကို ပြောတာပါ။ မျက်နှာဖော်ပြိး ခေါင်းမြှီးခြုံတာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး)
Maung Maung October 4, 2010 at 4:09 AM
Wearing Bukhas is showingasignature of oppression on women in some parts of the world still exists in 21st century. Obviously, this is not an Islamic culture. I’m just wondering that how they take driver license photos. If I have sisters, I don’t want to see them in this kind of dress.
Some muslin men argue that the women can gain the respect for wearing bukhas. I think it is not true, how you are going to give the respect even you don’t see who she is.
Just becauseawoman covers, doesn't mean she is automatically entitled to respect, or has already proven the worth of her mind. Respect must be earned regardless of one's appearance and it is not earned throughadress code alone.
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ October 4, 2010 at 4:42 AM
ကုလားတွေက မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ခိုကပ်နေပြီး မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးရေးအရ စော်ကားနေတာပါ။ ကျုပ်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဘုရားမြေတွေကို လုယူပြီး ပလီဆောက်တယ်။ ကုလားတွေ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး .. ဘယ်လောက် အောက်တန်းကျကျ စိတ်နာရကောင်းမှန်းမသိတာ မြန်မာတွေပါပဲ။ ကျုပ်တို့က ကုလားတွေကို စကားနာထိုးတော့ .. ကုလားက ဘာမှမဖြစ်ဘူး.. မြန်မာတွေက ဒေါသထွက်ကြတယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်။ ဘာသာရေးခွဲခြားတယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးစွပ်စွဲတယ်။ မြန်မာတွေက ( မြန်မာဆိုသည်မှာ ဗမာ ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ၊ ကရင် ၊ ပအို့ ၊ မွန် တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည် ) ကုလားကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ရမှ ခေတ်မှီတယ်လို့ ယူဆနေကြတယ်။
ဟဲဟဲ.. ကောင်းခန်းရောက်ပြီ။ အရင်အပတ်တုံးက ပါကစ္စတန်စစ်တပ်က ကုလား ၆ကောင်ကို မသေမချင်း ပြစ်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတခါလည်း ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကပဲ ပရိတ်သတ် မပျင်းအောင် နည်းသစ်လေးနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပလီဦးထုတ်ဆောင်းထားတဲ့ ကုလားတွေကို ဒုတ်နဲ့ မသေမချင်းရိုက်သတ် ပြပါတယ်။ အင်မတန်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသော မြန်မာတွေ.. အခုလုပ်ရပ်မှာ ဘယ်လို နာကြမလဲ? ။ ၀ါးဟားဟား ဖြေပေးကြပါ။ ကဲဗျာ.. အခုဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပါဦး။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ October 4, 2010 at 4:50 AM
ဒီခေတ်က ဧည့်သည်က အိမ်ရှင်ကို အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ခေတ်ဗျ။ ဧည့်သည် ကုလားတွေက လုပ်ချင်တာလုပ်.. ဆိုးချင်သလိုဆိုး အိမ်ရှင်တွေမှာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကုလားတွေဟာ ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားနေတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အဲဒီလူတိုင်းသိနေတဲ့ အမှန်တရားကို ထုတ်ပြောရင် Racist ဆိုပြီး အပြောခံရပါတယ်။ ကုလားတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချေးယို သေးပေါက်မကျန် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ လူအခွင့်ရေးနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသည်ဟု သဘောထားရတယ်။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ကုလားတွေလုပ်ရပ်ကို မျက်စိမှိတ်ထားရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာ ဘုရားမြေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တာကို ပြုံးပြုံးလေးခံရသည်။ မကျေနပ်၍ ထုတ်ပြောလျှင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖန်တီးတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံရပါတယ်။ လူအခွင့်ရေးနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသည်ဟု သဘောမထားပါ။ အိမ်ရှင်ဆိုတာ အနှိမ်ခံဘ၀ပါလားဗျာ။
ဧည့်ခန်းမှာ ချီးပါနေတဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြုံးပြုံးလေးမကြည့်၍ အပြစ်တင်ခံနေရတဲ့
မန်းကိုကို October 4, 2010 at 8:09 PM
ဟုတ်တယ်၊ မျက်နှာဖေါ်တာကတော့ ယေဘုယျလက်ခံလို့ ရပါတယ်။
“လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာက အမှန်မွတ်ဆလင်တွေဆီက အတွေးအခေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူမှုရေးပညာရှင်က အင်တာဗျူးမှာ ဒါအနောက်တိုင်း ပုံစံနဲ့တုန့်ပြန်တာလို့ ပြောတာပေါ့ (လူမှုရေးကျောင်းသူကြီးကို ဆရာလုပ်ပြသလို ဖြစ်နေပြီ)။
နောက်ပြီး အပေါ်က ဥပမာပေးထားတာတွေက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေ့ရတဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေက ဇွတ်ကိုငြင်းတော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့နေတဲ့ နေရာက အနောက်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု အသိုင်းအဝိုင်းမှာမို့လို့ ပြောလို့ရနေတာပါ။ ဘာကာ ဝတ်နေကျ ဆော်ဒီအာရေဗျတို့လိုမှာဆို ပြဿနာတွေက လူမသိကြလို့သာပါ။ ဒီခေတ်ကြီးရောက်နေပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာတွေက အပုံကြီး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်လိုပဲ ကိုယ့်အခွင့်အရေးရှိတာနဲ့ တောင်းဆိုရယူဖို့ မသိတဲ့အခါကျ ပြောရတော့ ခက်ပါတယ်။
Re : Maung Maung
It's too hard to tell someone he/she is being oppressed if they do not realized themselve. The similar situation is happening in Burma right now. Many people simply do not know they are being oppressed.
And yes, some men and even women who wear burqa contend that women gain respect by wearing it. I think they are right when they say it among their communities which scattered all over the world but not with people from other cultures.
I believed this is justaculture thing. You are right when you said that "Respect must be earned" but it is correct only for other cultures including us. Again, of course we won't want our sisters in that clothes and may need to talk with reasons but not to use fear asatool like some people do.
Anyway, we'll need to look from every perspective and decide what to do if this is effecting us directly. This matter is part of the driving force that give power to far-rights in Europe and looklike the culture/religious war is on the way.
p.s - By the way, I think blog owner intentionally left Zaw Myo's comments so that other readers can read some (extreme) contrast ideas.
မန်းကိုကို October 4, 2010 at 10:53 PM
စာရေးမလို့ စားပွဲပေါ်ထိုင်နေတုံး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အမူးသမားတစ်ယောက် လာရစ်တာနဲ့ အချိန်တွေကုန်သွားတယ်။ နောက်နေ့တွေမှ အားရင် အပေါ်က စာအချို့ကို ပြန်ရေးပါအုံးမယ်။
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ October 5, 2010 at 12:04 PM
လူများစုက အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေ စော်ကားတာကို ခေါင်းငုံ့ခံနေတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်က တခြားလူတွေလို သည်းမခံတဲ့အပြင် ကုလားတွေကို နှိပ်ကွပ်နေတော့ အရမ်းကို အစွန်းရောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အပေါစား စာအုပ်တွေမှာ ရေးထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဟာ ဘာသာတစ်ခုမိုလို့ ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို မယုံမကြည်ဖြစ်နေတာ မှားတဲ့ကိစ္စကြီးပါ။ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ မီဒီယာတွေမှာ ပြောသလို အစွန်းရောက်တွေကပဲဆိုးတာ အများစုအေးချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကြီးကို ရွတ်ပြချင်းလဲမရှိပါဘူး။ ကျုပ်အမှားကို သိပါပြီ.. ပြင်လိုက်တော့မယ်။
☀ ကိုယ့်အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ လက်တစုတ်စာ ကုလားတွေကို အများနည်းတူ . .. ကျုပ်လဲ ကြောက်တော့မယ်။ ကုလားတွေ ဆော်ကားသမျှ ခေါင်းငုံ့ခံတော့မယ်။ ( ကုလားတွေကို ကြောက်တယ်ဗျို့။ ၀ါးဟားဟား )
☀ မြန်မာတွေဟာ အချင်းချင်းပဲ စောက်တင်း စောက်ဖျင်းတွေပြောပြီး ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်ကြတယ်။ ကျုပ်လဲ အဲလိုပဲ ကုလားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်တော့မယ်။ လူလိမ် မြအေးသမီး ကုလားမကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားနဲ့ ။ ဟိုတို့ ဒီတို့လဲ မလုပ်ရဘူးနော် =P .. ငါဘဲလုပ်မယ် .. ဟဲဟဲ ။
☀ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ၊ စစ် ၊ အကြမ်းဖက်မှု စတဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ ပတ်သက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူတွေလို့ အကောင်းမြင်ပေးပါမယ်။
☀ ဘာသာခြားတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့၊ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာအဖြစ် မှတ်ယူပေးမယ်နော်။
☀ သူ့ချွေးမကိုတောင် ကြာကူလီခိုခဲ့သူ . . မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီ လူသတ်သမား မိုဟာမက်ကို သူတော်ကောင်းအဖြစ် သဘောထားတော့မယ်။ ကျေနပ်တော့နော်။ ၀ါးဟားဟား
ခေတ်နဲ့အမှီ ကိုယ့်အိမ်မှာခိုကပ်နေသည့် ကုလားများကို ကြောက်နေသည့်
ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဘဝပြင်ကြစို့ တရားတော် 20140326 ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာ...
Kachin Christian ni hpe zingri nga ai lam Mungkan de tsun ndau sai.
ရခိုင်အရေးနိုင်ငံတကာ အပြုသဘောချည်းကပ်ဖို့ မြန်မာတိုက်တွန်း
ကမ္ဘာ့ဖလား တနင်္ဂနွေပွဲများ အင်္ဂလန်၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုလမ်ဘီယာတို့ အနိုင်ရ
“Game of Thrones” သရုပျဆောငျ Kit Harington နဲ့ Rose Leslie တို့ရဲ့ လကျထပျပှဲ ကငျြးပပွီးစီး
ပြည်သူကို မထိခိုက်သည့် ငြိမ်းချမ်းသည့်နည်းဖြင့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မည်
Emergence of federal army is unlikely since there is one and only army – UPDJC secretary says
ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်မှုက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက်အနည်းဆုံးဖြစ်စေဟု ချင်း လူမှုရေးဝန်ကြီးပြော
Hamilton happy to cap 'beautiful' Sunday for England after World Cup win
Mystic Sk8 Cup 2018 - Day 2
Watch Janet Jackson Honor Her Dying Abusive Father In Emotional Radio Disney Speech!
ထမင်းစားတဲ့အခါ ငပိရည် တို့စရာ မပါရင် အာသာမပြေဘူး ဆိုတဲ့ အိချောပို
Five Viable Alternatives To The NBN
How to Handle SEO Effectively with Shopify Web Development?
Tin Moe Lwin’s donation
Trump steps up hardline rhetoric on immigration
The General Counsel as Key Corporate Social Responsibility Advisor
3 Personal Finance Goals Entrepreneurs Shouldn’t Neglect
Meet Our Patients (43): Kyaw Eh Paw’s Story – Newborn Baby
Ukrainian company offers unique drone’s wall foraborder with Russia
Israel is Being Criticized over Civilian Casualties, But Would US Forces Perform Any Better?
World Cup 2018 memes: England wins, fans say 'it's coming home' - CNET
Facebook Doubles Down On Controversial App For Kids
လက်တည့် မတည့်၊ ချက်ကျ မကျ၊
အင်း .. ခက်ပြီ
Turkey President Erdogan claims victory, expanded powers in dual elections
Is the battle for Deraa decisive for the war in Syria?
My Three Favorite Window Types
천둥소리에 놀란 아재 강아지 달래기
In the Democracy Era Student Unions WagedaPermanent Revolution
မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာ (A KP Appraisal)
ကျွန်မဆုံခဲ့ရတဲ့ သူတွေ(အပိုင်း၁၊ အသိုက်ဆောက်ချိန်)
UN Experts Say US Migrant Children Policy Reversal Still Lacking
Common Sense စပါးလုံး တစ်ထောက်စာ
အင်တာနက်ပေါ်ကြည့်တော့ အချို့လူတွေရဲ့ မြင်ပုံတွေးပုံတွေက စိတ်မှပုံမှန်ပါလေစလို့ ထင် ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ချွတ်ချော်နေပုံရတာ တေ...